BitCAD, ka jaban AutoCAD - Geofumadas
Ogast, 2008 AutoCAD-AutoDesk, IntelliCAD
BitCAD waa mid ka mid ah fursadaha badan ee ka soo baxa Hindisaha IntelliCAD, kaas oo kuu oggolaanaya inaad haysato qalabka CAD, sida AutoCAD u shaqeyso, laakiin kharash yar.
IntelliCAD wuxuu ahaa urur asaas leh oo ka mid ah Alliance Open Design, oo loo abuuray horumarinta jawiga qaabaynta kombuyuutarka oo saameyntii ugu fiicnayd ay tahay in lagu magacaabo AutoDesk si loo furo AutoCAD Lite tartami en qiimaha. Shirkadaha la xidhiidha IntelliCAD waxay bixiyaan lacag ku filan helitaanka maktabadaha horumarinta waxayna iibin karaan alaabta ay soo saaraan. oo dhan si ay u kala doortaan iyaga u dhaxeeya Bricscad, CADopia, BitCAD, CADian, progeCAD, MicroSurvey CAD iyo IntelliDesk.
Waqtigan xaadirka, Brics, horumariyaha BitCAD waa fulinta istaraatiijiyada suuq-geynta suuqa. Waxaan aaminsanahay in dalalka Hispanic meesha hay'adaha badan dhaleeceeyo qiimaha sare ee software ganacsiga waa in la horumariyaa xalal sida in tag by 315 Euros laakiin ku dhowaad dhammaan sifooyinka of AutoCAD.
Waxaynu u soconaa ugu yaraan saddex dabeecadood:
Si fudud loo isticmaalo bay'ada
Ku dhowaad dhammaan xal saarka IntelliCAD xamili deegaanka isla shaqada, line amarka, maktabad block, noocyada SHX, joogtada AutoLISP iyo xataa format billabo hooyo si ay ula style AutoCAD shaqeeyaan. Tani aad ayay u wanaagsan tahay maxaa yeelay waxay noo ogolaaneysaa in aan gaabinno barashada aqoonta dadka isticmaala caansan oo leh barnaamijka ugu caansan CAD-ga caalamka.
Waa ka raqiisan tahay kana fiican tahay AutoCAD Lite
Degmada ama shirkad yar ama xarumo tababar, intii aad isticmaali lahayd shatiga budhcad-badeednimada, xalka BitCAD way fiican tahay maxaa yeelay waxay ku siin doontaa sifooyinka aad u baahan tahay qiimo hoose ... xitaa kuwa isticmaala kuwa raadinaya nolol download free AutoCAD.
Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka ugu wanaagsan ka badan AutoCAD Lite waa wax macquul ah ee liisanka sabayn, jawi 3D, la jaan qaada oo dhan version billabo ka 2.5, waxaa macquul ah qaabab soo koraya, waxa ay taageertaa AutoLisp, block Xiisaha ActiveX la editor isku dhafan, kuwa kale.
Taageero iyo sii jiritaan
Inkasta oo ay jiraan qalab CAD ah oo lacag la'aan ah, faa'iidada BitCAD waa in uu leeyahay shirkad mas'uul ka ah sii waarida. Marka, marka laga reebo liisanka, waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa adeegyada taageerada Spanishka.
Haddii qof uu xiiseynayo BitCAD, halkan waa su'aalaha ugu badan ee soo socda:
1 Miyaad isticmaali kartaa kiniiniyada digitizerer leh BitCAD IntelliCAD V6?
2 Miyaan ku dhejin karaa logos ama sawirada qaabab sida BMP, JPG, iwm?
3 Miyaan isticmaali karaa dhuxulo leh sifooyinka BitCAD IntelliCAD V6?
4 Meelaha Moodeelka iyo Qorshaha Goobta Warqadaha ma la mid yihiin kuwa AutoCAD®?
5 U hoggaansanaanta prototypes iyo faylasha qaabeynta
6 Sanado badan ayaan ku shaqeynayay habka PGP-ga.
7 Faylasha PLT ma la abuuri karaa?
8 Miyaan isticmaali karaa cuntadeyda gaarka ah?
9 Miyaad barnaamij ka qaadan kartaa Autolisp?
10 Haddii BitCAD IntelliCAD V6 tahay mid aad u awood badan, maxaad ujecel tahay 10 wax ka yar macaamiishu?
11 BitCAD IntelliCAD V6 miyuu la shaqeeyaa darawallada marka lagu daro daabacadaha?
12 Ma nahay xarun wax lagu baro, ma waxaan u baahannahay inaan cashar u dhigo ardayda?
13 Shaashadda shaqada BitCAD IntelliCAD V6 miyaa la bedeli karaa?
14 U hoggaansanaanta heerarka suuqa
15 Xalka ugu fiican ee shirkadaha.
16 Qalabaynta ugu yar iyo talooyinka.
17 Ma jiri doonaan dhibaatooyin ka shaqeeya jawiga shabakada oo ay weheliso BitCAD iyo AutoCAD?
18 BitCAD IntelliCAD V6 oo u dhiganta AutoCAD® LT?
19 Miyay qaababka cabbirada ay ku jiraan sawir haynta sawirka BitCAD?
20 BitCAD IntelliCAD V6 miyey ku xirantahay sawirkayga hadda lagu sameeyey AutoCAD®?
21 Ma doonayo in aan waqti ama lacag ku luminayo si aan u barto software cusub CAD
Post Previous«Previous Maalin ka mid ah Nolosha Geofumaadas
Post Next 7 koorsooyin bilaash ah oo internetka ahNext »
3 Jawaab ah "BitCAD, ka jaban AutoCAD"
BitCAD xor ma aha. Waa la bixiyaa.
Ogosto isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan helo barnaamijkaan bilaash ah. Hadda waxaan isticmaali karaa xaydh 6.4 laakiin waxaa ku jira qaladaad, inkastoo ay tahay barnaamij fiican. Taasi waa sababta aan jeclaan lahaa in aan helo bitcad 7 bilaash ah ... ma jirtaa hab lagu helo?
Khibrada aan la leeyahay BitCAD waa mid cabsi badan. Waxaan bilaabay in aan u qaybiyo, waana inaan soo celiyaa lacag, waxaanan si fiican u soo kabsaday badhkii Bricsnet. Waxaan ka tagay qaybinta sababtoo ah qaar ka mid ah dhibaatooyinka dhabta ah ee haysta qalab awood leh lama xalin:
1 Xoogaa aad u yar
2 Awood la'aanta in la raadiyo faylasha la soo gudbiyey
3 Isbedelka gawaarida marka laga soo dejiyo AutoCAD
4 Waxaa la xiray daqiiqad kasta oo leh foormyo khafiif ah
5 Waaxda farsamda ma xallin karto dhibaatooyinka mid ka mid ah macaamiishayga kor ku xusan.
Sidaas awgeed, ku dhawaad ​​xarumaha 50 ayaa ku qoran liiska, intooda ugu badan oo ah aasaasiga ah oo ah miisaanka gaabiska ah ee barnaamijka aan la shaqayn karin.